अधिकांश स्थानीय तह भाडाका घरमा- प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार
अधिकांश स्थानीय तह भाडाका घरमा
फाल्गुन २९, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
भीमफेदी — मकवानपुरका अधिकांश गाउँपालिका र वडा कार्यालय विद्यालय, सामुदायिक भवन र भाडाका घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको भाडाको घर ।तस्बिर : प्रताप विष्ट/कान्तिपुर
जिल्लामा रहेका ८ गाउँपालिकामध्ये ५ वटाको आफ्नो भवन छैनन् । त्यस्ता गाउँपालिकाले भाडाका घर, विद्यालय वा सामुदायिक भवनमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । मकवानपुरको सुदूरपूर्वमा पर्ने बागमती गाउँपालिकाको केन्द्र झुरझुरेमा राखिएको छ । ‘झुरेझुरेमा घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले भने, ‘गाउँपालिकाको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने तयारीमा जुटिरहेको छौँ, भवनको अभावमा व्यवस्थित कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।’
मकवानपुरको दुर्गम कैलाश गाउँपालिकामा साविकको गाविसको भवन पनि थिएन । सुरुमा भूकम्पले चिरैचिरा बनाएको कृषि विकास कार्यालय सेवा केन्द्रको भवनमा गाउँपालिकाको कार्यालय राखिएको थियो । उक्त भवन अत्यन्त सानो भएकाले गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख बस्ने कार्यकक्षको अभाव रहेको थियो । केही समयपछि कालिकाटारमा नेपाली सेनाले सामुदायिक भवन निर्माण गरेको थियो । त्यही भवनमा प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यकक्ष राखिएको छ । कार्यकक्ष अस्तव्यस्त छ । गर्मीमा छाना तातेर भित्र बस्न सकिन्न । भाडामा लिएर गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन गर्न घर नै छैन ।
कैलाश मात्र होइन, राक्सिराङ गाउँपालिकाको हालत पनि त्यस्तै छ । राक्सिराङको चैनपुरमा राखिएको केन्द्र विद्यालयको छात्रावासमा छ । ‘छात्रावासको निर्माण गरेर गाउँपालिकाको कार्यालय उक्त भवनमा राखेका छाँै,’ गापाको अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भने, ‘गाउँपालिकाको भवन निर्माण गर्न बजेट छुट्याएका थियाँै, प्राविधिकको अभावले भवन निर्माण गर्न सकिएन ।’ यसैगरी, भीमफेदी गाउँपालिकाले पनि घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले भवन निर्माण नगरिसकेकाले घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ,’ गापा अध्यक्ष हिदम लामाले भने । सुगम क्षेत्रमा रहेको मनहरी गाउँपालिकालेपनि रजैयामा घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । इन्द्रसरोवर, मकवानपुर गढी र बकैया गाउँपालिकाले साविकको गाविसको जीर्ण र सानो भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
‘साविकको गाविस कार्यालय भवन सानो र जीर्ण छन्,’ मकवानपुर गढी गाउँपालिका अध्यक्ष विदुर हुमागाईँले भने, ‘गढीको साविकको गाविस भवनबाट जेनतेन गरेर कार्यालयको काम गरिरहेका छाँै, आफ्नै भवन आवश्यक छ ।’ मकवानपुरका ८ गाउँपालिकामा ७१ वडा छन् । तीमध्ये ५० वडाको आफ्नो भवन छैन । सबैभन्दा सानो र थोरै वडा भएको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको एउटा मात्र वडाको आफ्नो भवन छैन । उक्त वडाको कार्यालय सामुदायिक भवनमा राखेर सञ्चालन गरिएको छ ।
जिल्लाकै जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो बकैया गाउँपालिकामा १२ वडा छनन् ।
विगतमा गाविस कार्यालयको भवन सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा क्षतिग्रस्त बनाएकाले अहिले अधिकांश वडा कार्यालय भाडामा घर लिएर सञ्चालन गर्नुपरेको हो । वडा कार्यालय निर्माण गर्न एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालले बताए ।
‘भौतिक पूर्वाधारको अभावले गर्दा दैनिक काम गर्न नै समस्या भएको’ राक्सिराङ गाउँपालिका प्रमुख र मल्लले भने, ‘केन्द्रमा कार्यालय सञ्चालन गर्न भवनको नै अभाव छ ।’ पूर्वाधारहरूको अभावले गर्दा मकवानपुरका १० वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा समस्या जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रका कैलाश र राक्सिराङ गाउँपालिकामा रहेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मात्र होइन, केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई पनि समस्या भएको छ ।
केन्द्रको आफ्नो भवन छैन । गाउँमा कार्यालय सञ्चालन गर्न हुने भवन पनि भेटिँदैन । बस्नका लागि भाडामा घर पनि पाइँदैन । टाढा टाढाबाट गाउँपालिकाको केन्द्रमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरूलाई खान र बस्न पनि समस्या छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०८:३७
घडियाल बचाउन स्थानीयको साथ
चितवन — प्रजनन् केन्द्रमा हुर्केका घडियाल गोहीलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले प्राकृतिक बासस्थल नदी र खोलामा छाड्न लागेको ३७ वर्ष भयो । तर यो पटक खोलामा निकुञ्ज प्रशासनले एउटा नयाँ प्रयोग गर्‍यो ।
घडियाल जस्तै नदी र खोलासँग निकट सम्बन्ध भएका बोटे माझीकै हातबाट निकुञ्ज प्रशासनले गोहीलाई खोलामा छाडेको छ ।
बिहीबार चितवन निकुञ्जको मुख्यालय नजिक कसरा राप्ती नदी किनारमा घडियाल छाडिएको हो । पहिले पहिले यस्तो कामका लागि निकुञ्ज अधिकारी, सेना र सरकारी कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधि भेला हुन्थे । स्थानीय बासिन्दाको प्रतिनधिका रूपमा गोही छाडा मध्यवर्तीका पदाधिकारी पनि आएकै हुन्थे ।
प्रजनन् केन्द्रमा हुर्केका गोहीलाई नदी वा खोलामा छाड्नुअघि नम्बर लगाउने गरिन्छ । कसराबाट राप्ती नदीमा छाड्ने ४९६ नम्बरको गोही राखेको बाकस भुँइमा झारेपछि स्थानीय सुमित्रा र सुकमायाले गोहीलाई खोलाको पानीमा छाडे । त्यसलगत्तै अन्य स्थानीयले पनि गोही खोलामा छाडेका थिए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घडियाल गोही प्रजनन् केन्द्रका प्रमुख वेदबहादुर खडकाका अनुसार स्थानीयले १० वटा गोही पानीमा छाडेका छन् ।
‘गोही नदीमा बस्ने र बोटे माझी समुदाय पनि नदी र खोलामा आश्रित भएकाले उनीहरूलाई गोहीको महत्त्व बुझाएर संरक्षणमा सहयोग गर्नका लागि यसो गरेका हौं,’ सहायक संरक्षण अधिकृत
खड्काले भने ।
बोटे माझीले माछा मार्नुका साथै नदीमा प्रदूषण निकै बढेका कारणले पनि माछा कम हुँदै गएका छन् । ‘नदी सफा राख्न छुट्टै अभियान चलाउनुपर्छ । तर कम भएको माछा जथाभावी मार्दा पनिगोहीलाई असर गर्छ भन्ने जानकारी उनीहरूलाई दियौं,’ खड्काले भने । अघिल्लो वर्ष जालमा बेरिएका कारण एउटा भाले घडियाल गोही मरेपछि बर्दियाबाट ल्याउनुपरेको थियो । यस्ता सामान्य कुरामा सावधानी अपनाए गोहीलाई राम्रो हुने कुरा उनीहरूलाई भनेको खड्काले बताए । ‘उनीहरूको भाषामा सम्झाउन बोटे समुदायका एकजना व्यक्तिलाई नै ल्याएका थियौं,’ खड्काले भने ।
प्राकृतिक बासस्थलमा गोहीले अण्डा कोरल्न र बच्चा हुर्काउन गाह्रो हुँदै गएपछि सन् १९७८ मा प्रजनन् केन्द्र खुलेको हो । नदी र खोलाबाट गोहीको अण्डा संकलन गरेर प्रजनन् केन्द्रमा राख्ने गरिन्छ । सन् १९८१ बाट प्रजनन् केन्द्रमा हुर्केका गोहीहरू नदीहरूमा लगेर छाड्न सुरु भएको हो । गत वर्षसम्म एक हजार २ सय ४६ वटा घडियाल गोही नदी र खोलामा छाडिएको छ । तर दुई वर्षअघि सन् २०१६ मा गणना गर्दा चितवनको नारायणी, राप्ती र अन्य खोलामा १ सय ६६ वटा र बर्दियाको बबई र कर्णाली नदीमा ३२ वटा गरेर १सय९८ वटा घडियाल गोही भेटिएका थिए ।
प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०८:३६
भूकम्पपीडितले पाए नयाँ घर
एसिड प्रहार घटनामा कुटपिट ठहर
पप्पुले पाउने भएकाे राष्ट्र बैंककाे बालुवाटार भवन निर्माण अनिश्चित
कालोपत्रे गरिँदै तीन सडक
पूर्ण साक्षर घोषणा धकेलियो
गिठ्ठाले तान्यो ग्राहक
कुहिराको काग जस्तै बनेको न्यायिक समिति
सतीश शर्मा मंसिर २८, २०७५
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको झन्डै दुई वर्षको पदावधि पुरा हुन लागिरहेको अवस्थामा पनि संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, उनीहरूले आफै बनाएका कानुनहरू र कानुन, न्यायका...
प्रधानमन्त्रीले ठेक्का बाँड्ने
सम्पादकीय मंसिर २८, २०७५
पचास अर्ब रुपैयाँमाथिका आयोजना सोझै ठेक्का, त्यसको हर्ताकर्ता प्रधानमन्त्री । यस्तै प्रावधान समेटेर राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकार...
कांग्रेसभित्र केको कचिङ्गल ?
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम मंसिर २८, २०७५
केन्द्र र सातै प्रदेशको निर्वाचनमा पराजित भएको वर्ष दिन कटिसकेपछि बल्ल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक बस्दै छ । शेरबहादुर देउवा सभापति बनेपश्चात् यो पहिलो महासमिति हो ।...
महासमितिमा नयाँ ड्राइभ !
कृष्ण खनाल मंसिर २८, २०७५
नेपाली कांग्रेस बहुप्रतिक्षित महासमिति बैठकमा छ । गत वर्ष भएका तीनवटै खासगरी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले दुई तिहाइनिकट विजय पायो । केही गाउँ/नगरपालिकाबाहेक राज्य संरचनाबाट...
न्यायका नाममा नाटक
रामेश्वरी पन्त मंसिर २८, २०७५
प्रहरीले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको साढे चार महिनासम्म पनि बलात्कारी र हत्यारा फेला पार्न सकेको छैन । अनुसन्धानका नाममा पटकपटक समिति...
सरकारी स्कुल सिध्याउने खेल
पूर्ण पी राई मंसिर २८, २०७५
भोजपुरको सिद्धेश्वर मावि दाँवामा प्रधानाध्यापक बद्रीनाथ अधिकारी उमेर हदले गएको साउनमा अवकाश भए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सर्वसम्मत गरेको सिफारिसलाई जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइले मानेन । कैयौं...
भावी प्रधानन्यायाधीशको भनसुन
सम्पादकीय मंसिर २७, २०७५
भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न मंसिर २५ गते बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो । तेस्रोपल्ट पनि बैठक सर्‍यो । भोलिपल्ट राख्न खोजियो, फेरि भएन ।...
विवाह मेलामा राजनीतिक छाया
चन्द्रकिशोर मंसिर २७, २०७५
जनक र जानकीको नगरी जनकपुरमा यतिखेर उत्सवको बेला छ । राम र सीता विवाहको सम्झनामा मनाइने ‘विवाह पञ्चमी’ मेला लागेको छ । जनकपुर इतिहास र परम्पराभन्दा पुरानो...
ध्रुव सिम्खडा मंसिर २७, २०७५
गाउँमा छँदा सिकारीहरूले कालिजबारे भनेको सुनेको थिएँ, ‘कालिज चराले बेजोडको तीन वेग हान्छ । तेस्रो वेगपछि ऊ फतक्कै गल्छ र पखेटा फट्फटाउँदै लुकेर प्राण बचाउने प्रयास गर्छ ।...
शोकमा लैंगिक विभेद
डा. अरुणा उप्रेती मंसिर २७, २०७५
दुई वर्षअघि मेरी साथीकी ७० वर्षीया आमाको मृत्यु हुँदा सान्त्वना दिन गएकी थिएँ । साथीका ७५ वर्षीय बुबा दु:ख मानेर बसिरहेका थिए । जाडोका बेला भएकाले उनलाई...